Ugari neInvestment yeSerbia neGolden Visa
● Ugari nekudyara kuSerbia nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents eU Citizenship neInvestment muSerbia uye Magweta e Ugari neInvestment muSerbia uye ma broker e real estate Citizenship zvirongwa muSerbia zvinoshanda pamwe chete kuchengetedza kwevatengi.
Citizenship neInvestment vamiririri veSerbia vanopa mabasa ekugara nekudyara muSerbia, Citizenship nezvirongwa zvekudyara muSerbia, Citizenship nehurongwa hwekudyara muSerbia, wechipiri Citizenship nekudyara muSerbia, hunyanzvi hwekuva Citizenship nekudyara muSerbia, ugari nekugara nekudyara muSerbia. Citizenship nekusingaperi muSerbia, Citizenship kwenguva pfupi nekudyara muSerbia, Citizenship nehurongwa hwekudyara muSerbia, Citizenship nehurongwa hwekudyara muSerbia, Residency nekudyara muSerbia, Residency nezvirongwa zvekudyara muSerbia, Residency nehurongwa hwekudyara muSerbia, wechipiri Kugara nekudyara muSerbia, mbiri Residency nekudyara muSerbia, pekugara uye ugari nekudyara muSerbia, ugari uye ugari nekudyara muSerbia, hupfumi Residency zvirongwa muSerbia, Residency nechirongwa chekudyara muSerbia, Residency nezvirongwa zvekudyara muSerbia, kechipiri. pasipoti muSerbia, yechipiri pasipoti zvirongwa muSerb ia, yechipiri pasipoti chirongwa muSerbia, mbiri yechipiri pasipoti muSerbia, pekugara uye yechipiri pasipoti muSerbia, repamutemo repasipoti repiri muSerbia, yechipiri pasipoti nekudyara muSerbia, yechipiri ugari pasipoti muSerbia, kechipiri pasipoti chirongwa muSerbia, kechipiri pasipoti zvirongwa mu Serbia, vhiza yegoridhe muSerbia, vhiza dzegoridhe muSerbia, zvirongwa zvegoridhe vhiza muSerbia, chirongwa chendarama vhiza muSerbia, yechipiri vhiza yegoridhe muSerbia, yechipiri goridhe vhiza chirongwa muSerbia, mbiri yegoridhe visa muSerbia, ugari uye vhiza vhiza muSerbia, kugara uye visa yegoridhe muSerbia, mugari vhiza mugari muSerbia, chirongwa chendarama vhiza muSerbia, zvirongwa zvegoridhe vhiza muSerbia.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Citizenship nekudyara muSerbia nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muSerbia ye Citizenship nekudyara: 250,000
Nhanganyaya Serbia uye Citizenship neInvestment
Yakakurumbira hushamwari hweSerbia, kutendeseka, uye hunhu hwakanaka, kunyanya zvine chekuita nekufambisa vashanyi vanobva kunze kwenyika, zvave kuzivikanwa kubva pazviitiko zvekare, uye ikozvino zvinowanzoonekwa. Kokorodzano netsika zvinoratidza kuti munhu wese weSerbia anofanirwa kuve mugamuchiri ane hunhu uye mushanyi wese anofanira kusiya nyika nekugutsikana kukuru uye aine zvakawanda zvakanaka zvinoonekwa. Chikamu chepamusoro chevashanyi vanoshanyira Serbia vanogara vachifara kudzoka, uye vamwe vanotosarudza kutamira kuno kwenguva yakati rebei.
Kana wekunze akasarudza kutamira kuno, vanhu vemuSerbia vanozozvibvunza zvavo - zvii zvinangwa zvevatorwa izvozvi uye chii chakamukurudzira kusiya nyika yake otamira kuSerbia? Iyi mibvunzo inowanzo buda, nepo ichinyanya kunetsekana kuti vazhinji vevaSerbia vanofunga kuti mumarudzi akasiyana vanhu vanhu nekurarama vanorarama zvirinani… Kunyange zvakadaro, vekunze vanosarudza kutamira kuno - vakaparadzaniswa nehunhu hwedu, hwepedyo uye kuwanika kwekusangana. , kazhinji funga nzira yekuva nenguva yakanaka, kuva nekuwanda kwekunakidzwa nekukoshesa hupenyu. Zvakare, chikuru chikamu chavo chinosheedzera kune izvo zvekushandisa mari muSerbia zvakadzikira zvichisiyaniswa nenyika dzekuMadokero eEurope, kana zvichisiyaniswa nenyika zhinji dzakasiyana pasi. Kazhinji kazhinji, vekunze vanouya kuSerbia vanosarudza kugara muBelgrade, zvisinei, kune vamwezve vanhu vanosarudza, nezvikonzero zvakasiyana, kuti vagare mune mamwe madhorobha eSerbia.
Imwe yeinononoka kutsanangurwa isingagumi uye tsananguro dzinonakidza kumashure kwekutamira kuSerbia ndeyechokwadi - tsvaga kunamatwa. Isu hatifanire kuregeredza nzira iyo vakadzi veSerbia nevarume vanonzwisiswa sevanonyanya kukwezva. Nenzira iyi, pamwe, isu hatifanire kushamiswa kana vekunze panguva yavo yezororo kana bhizinesi kushanya pasina kwavanoenda uye vosarudza kugara muSerbia nezvikonzero zvekutsvaga rudo uye kuyedza karma yavo pano! Pamusoro pezvo, pamwe chinzvimbo chakasarudzika chevanhu vanosarudza kugara muguta guru reSerbia ndechekuti inowanzozivikanwa seguta "rinoenderera nemaawa makumi maviri nemana". Naizvozvi, isu hatisi kungoreva maawa makumi maviri nemana ekutsauswa pamabhawa akasiyana siyana uye makirabhu, asi nekuwedzera izvo zvimwe zviitwa zvekubatsira, senge zvitoro zvekutengesa uye zvigadzirwa zveshoko zvinoshanda zvisingaite. Chero zvaunoda, chero nguva kana husiku - zvinofungidzirwa kuti uwane uye upinde muBelgrade, Serbia!
Chaizvoizvo kugara muBelgrade, Serbia?
Kana iwe ukabvunza mumwe munhu anouya kuBelgrade kubva kune rimwe, guta rakadzikama kwazvo muSerbia, iye / iye achakuzivisa kuti kugara muBelgrade kwakakurumidza uye zvino uye zvino kunetsa, uye kuti chakanyanya kunetsa inyaya yekufambisa kwevanhu. uye kuziva kubuda, pamukana wekuti uve nemotokari. Kune vamwe vanhu, mari yekugara muBelgrade yakakwira, sezvo ichinyatso shandiswa kudzikisa mitengo munzvimbo dzavakakurira! Kugara muBelgrade kunodhura kwakasiyana nemutengo chaiwo wezvinhu zvekutanga mune mamwe madhorobha eSerbia, zvisinei kugara muBelgrade zvirokwazvo kunogona kupa masuo akavhurika akakurisa ehupenyu hwese hunonakidza uye hwakaomeswa uye huwandu hwekunakidzwa, hwemagariro kana mutambo zviitiko, kudzidza zviri nani, uye zviri pachena - mamwe masuo akavhurika ebasa.
Ko ivo vekunze vanosarudza kuenda kuSerbia vanoti chii nezve avhareji mutengo wezvinhu zvekutanga?
Kune vagari vasingazivikanwe vanosarudza kutamira kuSerbia kubva kunzvimbo dzakakosha dzemadhorobha eEurope, mutengo wakatarwa wezvinhu zvakakosha muSerbia kazhinji ishoma, zvichitarisirwa kuti tarisiro yekunakidzwa kwemazuva ese muWestern Europe nyika dzakakwirira kupfuura pano. Iko kune chinzvimbo chakasarudzika zvirokwazvo kune avo vanhu vasiri kukwereta mafooti kana vasina zvikwereti zvakakura mumabhangi kana zvisungo zvakasiyana, nekuti izvo mari yekurenda ndiyo yakanyanya kukura pakati pemitengo yezuva nezuva muBelgrade Serbia.
Semutemo wenguva dzose, kana iwe ukawana nzira yekuwana yakabhadharwa mutsetse webasa uye usingashandise kuwanda kwemari pazvinhu zvisina musoro, avhareji mutengo wezvinhu zvekutanga muBelgrade wakakodzera kwazvo. Saizvozvowo, muchiitiko chekuti isu tiri kufunga nezve chete chiyero chemitengo, tisingatarise huwandu hwakawanda hwezvakanakira izvo zvinogara muBelgrade zvinogona kupa, zviri nyore kwazvo kufungidzira kuti mari dzekugara muBelgrade dzakakwirira kupfuura kurarama mari mune imwe. Serbian madhorobha. Zvisinei, kupesana nenzvimbo dzinoverengeka dzekuEurope dzinowanikwa mumadhorobha, mari yekushandisa yakaenzana kana kutodzikira… Vanhu vemuSerbia vanoti "Zvese zvine zvazvinoda nezvinovhiringidza!", Saka chero zvinofarirwa nemunhu wese!
Serbia inzvimbo yakanaka here yekugara?
Sekuenderana nerundundale yakaunganidzwa nedhinari inoshamisa inozivikanwa "Nyanzvi yezvemari", iyo inotarisa kuongororwa kweanopfuura mazana mana emitengo ye400 manejimendi manejimendi uye zvinhu, zvinosanganisira kutakura, kuhaya, mitambo yekutandarira, kuchena kwemunhu mumwe nemumwe, zvekushandisa mumba, zvinwiwa, zvipfeko, chikafu, kudzidza kwakazvimiririra uye akasiyana manejimendi, Singapore yemakore mashanu kumashure kusvika kumashure ndiro guta rinodhura kwazvo papasi. Belgrade zvakare zvakare, iri pakati pemaguta emunharaunda akatamisa nzvimbo zhinji kunzvimbo yekutanga pane iyi runyorwa kubvira gore richangopfuura. Pakati penzvimbo gumi dzinodhura dzemadhorobha iParis, Zurich, Geneva, Oslo, Hong Kong, Copenhagen, Seoul, Sydney, neTel Aviv. Mari diki-diki dzekugara dziri muDhamasiko, Almaty, Caracas, Algeria, Bucharest, Bangalore, Lagos, Chennai, Karachi, neNew Delhi. Nenzira iyi, mari dzekugara muBelgrade, neSerbia zvese mune zvese, zvinowanzoita zvega zvega uye zvinoenderana nepedyo neruzivo rwekumba runovimba nezvinhu zvakawanda, uye mune zvese zvazviri, hazvisi izvo zvakakurisa kana zvidiki pakuongorora nedzimwe nyika kana nharaunda dzemaguta eEurope!
Mhinduro kumubvunzo kana Serbia inzvimbo yakanaka yekurarama haina kukanganiswa nehuremu hwemitengo yezuva nezuva, asi nekuwedzera nezvinhu zvisingaenzaniswi, semuenzaniso, mumwe munhu achiba pamusoro pezvinoita kuti mumwe munhu asimuke uye kutenderedza mweya wake! Muchiitiko chauri kubvunza kuti Serbia inzvimbo yakanaka here yekugara, tinokuzivisa iwe kuti zvese zvinoenderana nezvido zvako, zvaunoda, zvido, zvirongwa, uye kugona kwako! Kwenguva yakareba kwazvo, pakave nezvakaitika zvakawanda zvevanhu munzira mbiri, kubva kuSerbia, uye kuSerbia. Vanhu vashoma vakawana mufaro wavo muSerbia, nepo vamwe vakauwana kune imwe nzvimbo. Chero zvazvingaitika, chinhu chimwe ndechechokwadi - mune chiitiko chekuti iwe uri kutsvaga rudzi nevanhu vangakurumidze kukugamuchira uye kukugamuchira iwe chero wauri uye chero nzvimbo yauri kubva, panguva iyoyo iri chokwadi Serbia! Kugamuchirwa uye kufara!
Zvekutanga ruzivo rwe Citizenship neInvestment yeSerbia
Chishoma kudyara kwe Citizenship nekudyara muSerbia
Mari yekuwedzera ye yendarama vhiza ye Serbia
Citizenship nekudyara kuSerbia
Kuchengetedza nguva yeU Citizenship nekudyara kweSerbia
Mushure memakore matatu ekusagadzikana kwekugara kuburikidza neyakajairika
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa vagari vemuSerbia
Investment Sarudzo dze Ugari nekudyara kweSerbia
Chipo / Zvivakwa / Bhizinesi
Nei uchienda kuCitizenship nekudyara kweSerbia
Serbia inyika iri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweEuropean Balkan peninsula ine guta guru reBelgrade rinozivikanwa nenzvimbo dzayo dzekuchamhembe nemakomo ane nzvimbo dzekutandarira kuchamhembe. Serbia ine chinzvimbo chakasarudzika pakati peEast neWest yeEurope. Munguva yaro yakareba uye yakapfuma nhoroondo, yakagara ichisanganisira mutsauko wevanhu uye zvitendero. Hukama hwehukama hwakakosha pamwe nehukama nenyika dzakasiyana siyana zviripo nhasi mukuti varidzi vemapasipoti eSerbia vanogona kufamba vasina vhiza kubva kuSpain kuenda kuSiberia, uye zvakare Serbia ine mukana wekubata zvibvumirano zvekutengeserana zvinobatsira neEU neRussia.
Kunyangwe paine chokwadi chekuti mugari-we-wekudyara chirongwa Serbia iri kupa ichangotangwa yatoonekwa seimwe yeanokurumidza uye anodhura zvirongwa zvekuwana ugari hweEuropean, whit hapana chinodiwa chekupa yapfuura bhizinesi ruzivo kana hunyanzvi hwemitauro hunodiwa kunyorera .
Kufamba kwemhuri muSerbia
Iyo mabhenefiti ako eSerbia pasipoti anokupa iwe akawedzerwa kune vanovimba vemhuri kusanganisira vana vanosvika zera makumi maviri neshanu uye vabereki vane makore anodarika makumi matanhatu nemashanu.
Citizenship Nehurongwa hwekudyara muSerbia insite
Iyo yekugadzirisa nguva yechirongwa ichi inowanzo kungove yakatenderedza mwedzi mitatu pasina zvido zvekuratidzira yapfuura bhizinesi kana manejimendi ruzivo, uye hapana chikonzero chekupasa bvunzo yemutauro. Iko kunyorera kunogona kupihwa uye kuongororwa pasina iwe kuti ubvunzurwe.
Mari inodiwa kuSerbia
Parizvino Serbia iri kupa dzimwe nzira nhatu dzekuwana vagari vemuSerbia nekudyara. Yekutanga inoda chipo chisingadzoreke chinosvika EUR 250,000. Zvikasadaro, iwe unogona kusarudza kutenga zvivakwa muSerbia kweinosvika EUR 250,000 uye pakupedzisira, unogona kuita bhizimusi kudyara kweinosvika EUR 500,000 uye kushandisa yakaderera ye4 Serbia vemunyika. Chero zvazvingaitika ziva kuti iwe unotarisirwa kuchengetedza zviwanikwa zvako kweinenge makore mashanu.
Pamusoro pezvo, kune mubhadharo wekushandira weEUR 7,500 uye mubhadharo wehurumende weEUR 25,000 (EUR 50,000 mune bhizinesi rekudyara sarudzo) ivo vanyoreri vanofanirwa kubhadhara.
Mutengi kutsigira Citizenship nekudyara kweSerbia
Chikwata chedu che Citizenship neInvestment Agents eSerbia uye Citizenship ne Investment Lawyers yeSerbia inopa vatengi uye mhuri dzavo muSerbia nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuSerbia, kugara nekudyara kubva kuSerbia uye mimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira mukugara nekudyara kubva kuSerbia kana Golden Visa kubva kuSerbia kana ugari nekudyara kubva kuSerbia kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuSerbia, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani mu Serbia kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muSerbia uye zvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuSerbia nekugara kwechipiri.
Rutsigiro Rwakakosha kune Vagari veSerbia:
Isu tinopa zvinodhura Citizenship nekudyara mabasa zveSerbia, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo zveSerbia, inokwanisika kudyara vanoenda kune dzimwe nyika kuSerbia, Citizenship inodhura nevezvekudyara maserbia, Citizenship inokwanisika nemagweta ekudyara eSerbia uye nekambani yekutenga inodiwa yeSerbia.
Ugari nekudyara kubva kuSerbia kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muSerbia kune 37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuSerbia kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuSerbia kuenda ku106 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuSerbia.
Goridhe visa zvirongwa muSerbia kune 37 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuSerbia kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuSerbia kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuSerbia kuenda ku106 Nyika.
Ugari neInvestment yeSerbia kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvezvivakwa muSerbia nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana kudzoka kwakanaka pane kudyara muSerbia, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwavakaita kwavo kweCitizenship nekudyara kweSerbia. Tine tie-up nevashoma varidzi venzvimbo muSerbia vane yakanaka track rekodhi uye yavo pfuma iri munzvimbo dzakanaka muSerbia, kutora zvakanaka kudzoka.
Yakanakisa edzimba dzimba dzekugara zvirongwa zveSerbia nemari yekudyara muzvivakwa muSerbia.
Unoda kuziva - Serbia Citizenship neInvestment
Citizenship neInvestment Gweta reSerbia rinopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Citizenship nekudyara kuSerbia. Yedu standard masevhisi e Citizenship neInvestment kuSerbia inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utamire kubva kuSerbia kana kuenda kuSerbia, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo tisati takurudzira Citizenship nekudyara kuSerbia kune vatengi kuti vawane Citizenship yeSerbia uye kudzikisa njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira weSerbia, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira kuri nani.
Kuti isu tifambire mberi neUgari hwekunze nekudyara kunyorera kuSerbia tinoda makopi akaongororwa evatengi uye nhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile emagwaro Ugari hwemo nekudyara kunyorera kuSerbia. Magweta edu akasarudzika e Citizenship nekudyara kuSerbia uye goridhe visa ichabatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveCitizenship nekudyara kunyorera kuSerbia kwagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvakakodzera zveSerbia
Kana chikumbiro chako cheU Citizenship nekudyara kweSerbia changobvumidzwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye totanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Hatitsigire kana kupa Citizenship neinvestment services muSerbia kune pazasi vanotaurwa Vanhu kana mabhizinesi muSerbia:
Citizenship nebasa rekudyara kuSerbia hazvipi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovanisa zvombo uye zvombo kubva kana kuSerbia.
Citizenship nezvirongwa zvekudyara zveSerbia hazvipi kupihwa kweTechnical surveillance muSerbia kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuSerbia.
Citizenship nekutsvaga kwekudyara kweSerbia hazvipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana tsotsi zviitiko muSerbia.
Citizenship nerutsigiro rwekudyara yeSerbia haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muSerbia.
Citizenship nebasa rekudyara kuSerbia haisi yemabhizinesi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine njodzi zvebhaoloji kana nyukireya muSerbia.
Citizenship nechirongwa chekudyara rutsigiro rweSerbia haruwanikwe kune vanhu veSerbia inobata mukutengesa, kuchengetedza muSerbia, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Citizenship nekudyara yeSerbia haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Citizenship zvirongwa zvebasa yeSerbia hadzisi dzezvitendero uye masangano avo anobatsira muSerbia.
Citizenship nebasa rekudyara mu Serbia haina kupihwa kune vanhu vanobata Zvinonyadzisira muSerbia.
Ugari Hwedu magweta muSerbia haitsigire bhizinesi rekutengeserana nezvinodhaka muSerbia.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veSerbia neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekuramba kupi zvako kubva kuzviremera muSerbia kubvumidzwa kwekunyorera Citizenship nekudyara muSerbia.
Ugari nekudyara muSerbia nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa hukuru hwehukama nerutsigiro rwekudyara muSerbia yekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muSerbia.
Ichitsigirwa nehukama hwepasi rose nehunyanzvi hwekudyara uye zvinodiwa nemutemo weSerbia, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Hwedu Hugari nemasevhisi ekudyara kuSerbia inopa mitengo yakachipa, iine mwero wekubudirira weSerbia.
Isu takatora makore echiitiko kune hunyanzvi hwehukama kuSerbia inotsigira vatengi uye mhuri dzavo kuSerbia.
Ruzivo rweHurumende nevekudyara kukumbira maSerbia nevamiriri vepamutemo veSerbia vachipa rubatsiro kune vatengi
Tine akanakisa magweta nevamiriri veSerbia kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Usati uri Citizenship yeSerbia uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuSerbia
Isu tine ruzivo rwepasi rose mu Citizenship nekudyara kusanganisira Serbia, kubatsira vatengi kubva kuzere pasirese nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Citizenship yako nekudyara kuSerbia inokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu nenomwe dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weCitizenship neInvestment kuSerbia
Kuti uverenge mutengo weCitizenship nekudyara kweSerbia ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veSerbia, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchasanganisira, kunosanganisira, mutengo weUgari nehurongwa hwekudyara kuSerbia uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza yeSerbia
Maitiro Ekubvumidza Kubatira Serbia
Kwekugara kwenguva pfupi muSerbia
Permanent Residence muSerbia
Embassies uye ma Consulates eSerbia
Ugari neInvestment muSerbia uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa muSerbia nezvinodiwa nekukurumidza kana mune ramangwana.
Kana iwe uri kuronga kutamira nemhuri yako kuSerbia nekudyara mari, isu semumwe wako weSerbia, tiripo kuti tipe mamwe akawanda sevhisi uye uye kana paungangoda muSerbia nemitengo inodhura.
Kunze kweCitizenship nekudyara kwekudyara kweSerbia, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muSerbia, iyo iwe yausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nechero vamwe vanopa mazano veSerbia ichitigadzira shopu-yekumira yeSerbia nenyika dze106.
"Isu takaisa makore ekuyedza uye pasi rose mu106 Nyika kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizinesi reSerbia mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira nzira yemutengi wedu kupfuura Citizenship nekudyara kweSerbia nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga muSerbia nepasi rese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muSerbia kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muSerbia yakachipa nesu.)
Chero ani investor anotamira kuSerbia angazoda akaundi yebhangi wega muSerbia uye kambani yebhangi account muSerbia, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Sipo yekubhadhara muSerbia
Incase iwe unoda kubvunzana muSerbia, ye mhinduro dzemadhijitari muSerbia senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muSerbia kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meCitizenship nekudyara ku Serbia kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga ravepo bhizinesi muSerbia kutanga pakarepo muSerbia.
HR Services muSerbia
Our kambani yevashandi muSerbia inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muSerbia vakasununguka.
Nhamba Dzenhare dzeSerbia
Bhizinesi foni nhare dzeSerbia pamwe ne chaiwo manhamba eSerbia Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muSerbia
Accounting, kushingairira kwakakodzera muSerbia uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muSerbia
Setup bhizinesi muSerbia
Mushure meCitizenship nekudyara kuSerbia, setup bhizinesi mu Serbia.
Isu tinopa pazasi zvataurwa IT mhinduro muSerbia
Kugadzira Webhu muSerbia
Ecommerce Kuvandudza muSerbia
Webhu kuvandudza muSerbia
Kuvandudza kweBlockchain muSerbia
App Kubudirira muSerbia
Software Kubudirira muSerbia
Magweta e Citizenship neInvestment muSerbia
Isu tinopa Citizenship yepamutemo neInvestment mhinduro dzeSerbia uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuSerbia, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo kuSerbia ine vamiririri vakanakisa vekupinda muSerbia, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa vatengi sevhisi yeSerbia ne kujekesa nzira dzekudyara dzekugadzirisa vanhu veSerbia nemhuri dzavo. Hwedu Hugari nechikwata chekudyara kuSerbia inopa mhinduro dzakagadzirirwa kubudirira kweVatengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mukadzi, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuSerbia, pane mvumo yekugara muSerbia inogamuchirwa.
Simba regweta reSerbia rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neHurumende nevemagweta ekudyara muSerbia. Kana iwe uri muSerbia kana kuronga kushanyira Serbia, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kweSerbia iri kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mundima yeSerbia. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakapihwa dzidziso kana kunyoreswa zviri pamutemo nemumiriri weSerbia.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Ugari neInvestment muSerbia
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muSerbia?
Kugara nekudyara kuSerbia, kunogona kutsanangurwa sekuti, kuwana ugaro hweSerbia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweSerbia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuti ugare nekudyara kuSerbia, ugaro nehurongwa hwekudyara kuSerbia. inotsigirwa nekugara nenzvimbo dzekudyara kuSerbia, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muSerbia, kugara kwakanyanya nemagweta ekudyara muSerbia uye kugaramo kwakanakisa nevarairidzi vezvekudyara kuSerbia, vachishanda pekugara zvakanakisa nevamiriri vezvekudyara muSerbia, uye mafemu akanakisa ekuona nezvekupinda munyika. muSerbia.
Kugara nemabasa ekudyara kuSerbia | Kugara nevamiriri vezvekudyara muSerbia | Kugara nemagweta eInvestment muSerbia | Kugara nemagweta ekudyara muSerbia | Kugara nevezvekudyara varairidzi veSerbia
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muSerbia?
Ugari nekudyara kuSerbia, kunogona kutsanangurwa sekuwana ugari hweSerbia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweSerbia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muSerbia. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuSerbia, ugari nehurongwa hwekudyara kuSerbia inotsigirwa nehugari nehumambo hwekudyara kuSerbia, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisa nemagweta ekudyara muSerbia, ugari hwakanakisa nemagweta ekudyara muSerbia uye vagari vepamusoro nevevanopa mari veSerbia, vachishanda kuva mugari wakanakisa nevamiririri vezvekudyara muSerbia, uye akanakisa mafemu ekubvunza vanoenda kune dzimwe nyika muSerbia.
Affordable Investor immigration services kuSerbia | Vanodhura vanopinda munyika muSerbia | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muSerbia | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta muSerbia | Vanodhura varidzi vemari vanoona nezvekupinda muSerbia | Affordable immigration law firms kuSerbia
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri muSerbia?
Yechipiri pasipoti muSerbia, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weSerbia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweSerbia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, real estate, bhizinesi, hurumende zvisungo, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuSerbia, yechipiri pasipoti chirongwa cheSerbia inotsigirwa rwechipiri pasipoti masevhisi eSerbia, kuburikidza nemagweta edu epiri epasipoti akanaka muSerbia, magweta echipiri epasipoti muSerbia uye akanakisa echipiri mapasipoti mazano eSerbia, vachishanda kumahofisi echipiri epasipoti muSerbia, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muSerbia.
Chechipiri pasipoti masevhisi eSerbia | Chechipiri pasipoti vamiririri muSerbia | Yechipiri mapasipoti magweta muSerbia | Yechipiri mapasipoti magweta muSerbia | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuSerbia
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muSerbia?
Ndarama vhiza muSerbia, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana pekugara mvumo yeSerbia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweSerbia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvisungo zvehurumende, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuSerbia, chirongwa chendarama vhiza yeSerbia inotsigirwa goridhe vhiza masevhisi eSerbia, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe vhiza magweta muSerbia, akanakisa egoridhe vhiza magweta muSerbia uye akanakisa endarama vhiza varairidzi eSerbia, vachishanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muSerbia, uye akanakisa ekupinda kwevanoona mafemu muSerbia.
Ndarama vhiza services kuSerbia | Ndarama vhiza vamiririri muSerbia | Magweta egoridhe vhiza muSerbia | Magoridhe vhiza magweta muSerbia | Goridhe vhiza varairidzi veSerbia
Ndeipi iri shoma mari yekudyara kweCitizenship nekudyara muSerbia?
Pashoma kudyara kweCitizenship nekudyara muSerbia kuri 250,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuSerbia kuUgari nekudyara
Ehe, gweta redu muSerbia nevamiriri muSerbia vanopa rutsigiro rweCitizenship nekudyara muSerbia.
Ugari neInvestment kuSerbia inodhura?
Mutengo weUgari neInvestment kuSerbia uye Citizenship nemari inodiwa mari kuSerbia ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete kubhadharisa fizi yeCitizenship neInvestment kuSerbia, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvekutsigira Citizenship neInvestment mhinduro.
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Citizenship nekudyara kuSerbia kana investor visa kuSerbia?
Citizenship kubudikidza nekudyara masevhisi kune anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mashoma mienzaniso ndeye Citizenship nekudyara kuSerbia kubva kuAsia, Citizenship nekudyara kuSerbia kubva Africa, Citizenship nekudyara kuSerbia kubva kuEurope, Citizenship nekudyara kuSerbia kubva kuSouth America, Citizenship nekudyara kuSerbia kubva kuMalaysia, Citizenship nekudyara kuSerbia kubva kuBangladesh, Citizenship nekudyara kuSerbia kubva kuIndonesia, Citizenship nekudyara kuSerbia kubva kuSri Lanka, Citizenship nekudyara kuSerbia kubva kuNepal, Citizenship nekudyara kuSerbia kubva kuIndia uye Citizenship nekudyara kuSerbia kubva kuUAE.
Hugari hwehunyanzvi neInvestment Guidance yeSerbia
Kumbira kubvunza Mahara kwehukama hwako neInvestment kuSerbia
Mazwi akakosha mu Citizenship neInvestment yeSerbia
Link to Dhipatimendi Rekupinda muSerbia , vane basa rekuumba marongero ekuchimbidza kuenda kune dzimwe nyika muSerbia